३८ जनामा गरिएको रुसि कोरोना खोपले देखायो यस्ता सा’इड इफेक्ट ! – Life Nepali
३८ जनामा गरिएको रुसि कोरोना खोपले देखायो यस्ता सा’इड इफेक्ट !
एजेन्सी – राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मंगलबार कोरोनाको सफल खोप भनि घोषणा गरिएको कोरोना खोप केवल ३८ जनामा मात्र टेस्ट गरिएको खुलेको छ। रूसको आधिकारिक दस्तावेजको हवाला दिँदै डेली मेलले आफ्नो रिपोर्टमा सो कुरा उल्लेख गरेको छ। उक्त खोपका धेरै साइड इफेक्ट पनि रहेको समाचारमा जनाइएको छ। रिपोर्टका अनुसार ३८ जनामा टेस्ट गरिएपछि यो खोपलाई देशको नियामक निकायले स्वीकृत दिएको छ।
फेज-३ को ट्रायल अघिनै स्वकृती दिइएको रुसको यो खोपबारे अहिले अमेरिका लगायत युरोपेली देशका वैज्ञानिकहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्। रुसी समाचार एजेन्सी फन्टान्काका अनुसार यो खोप दिइएका मानिसमा दुखाई हुने, हात-गोडा सुन्निने, उच्च ज्वरो आउने जस्ता साइड इफेक्ट देखिएको छ। साथै, कमजोरी महसुस हुने, उर्जाको अभाव हुने, भोक नलाग्ने, टाउको दुख्ने, पखाला, नाक बन्द हुने, घाँटी दुख्ने र नाकबाट बग्ने जस्ता गुनासोहरू पनि रिपोर्ट गरिएको छ। ‘***थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’**,
उक्त रिपोर्टका अनुसार रूसी अधिकारीहरूले केवल ४२ दिनको रिसर्च पछि यो खोपलाई अनुमोदन थिए। यस कारणले यो खोप कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने कुराबारे धेरैले शंका गरेका हुन। खोप दर्ताका लागि दिइएका कागजातमा महामारी बारे खोपको प्रभावको बारेमा कुनै क्लिनिकल स्टडी नगरिएको डेली मेलले जनाएको छ।
यद्यपि मंगलबार पुटिनले आफ्नो सम्बोधनमा यो खोपले सबै आवश्यक टेस्ट पार गरिसकेको बताएका थिए। यदि खोप गलत वा खतरनाक सावित भए यसले झन् महामारी र विकराल रुप लिनसक्ने विज्ञहरुको चिन्ता छ। रिपोर्ट अनुसार सुई दिएपछि देखिएका साइड इफेक्टका अधिकांश घटना आफै निको भएका थिए। तर, अध्ययनको ४२ औं दिन सम्म पनि ३२ वटा साइड इफेक्टका घटनाहरू देखिएको बताइएको छ।
Previous WHO ले भन्यो – यी टिप्सहरु प्रयोग गर्नुहोस, तपाईलाई कोरोना कहिल्यै लाग्दैन !
Next खुशीको खबर : सुदूरपश्चिममा चार हजार जनाले कोरोना जितेर घर फर्किए”